Enige - Датский - Бирманский Переводы и примеры
Вы искали: enige (Датский - Бирманский)
ဧဝေါဒိနှင့်သုန္တုတ်တို့သည် သခင်ဘုရား၌ သဘော တညီတညွတ်တည်း ဖြစ်ရကြမည်အကြောင်းကို ငါတောင်းပန် သွေးဆောင်ပါ၏။
Men Udholdenhedensog Trøstens Gud give eder at være enige indbyrdes, som Kristus Jesus vil det,
သင်တို့သည် ငါတို့ သခင်ယေရှုခရစ်၏ ခမည်းတော်တည်းဟူသော ဘုရားသခင်ကို တညီ တညွတ်တည်း နှုတ်မြွက်၍ ချီးမွမ်းစေခြင်းငှါ၊
Men alle er enige om, at det bør være deres ret at vælge, om de vil bære det eller ej.
da fuldkommer min Glæde, at I må være enige indbyrdes, så I have den samme Kærlighed, samme Sjæl, een Higen,
သင်တို့သည် အချင်းချင်းချစ်ကြ၍၊ စိတ်မကွဲပြားဘဲ တလုံးတဝတည်း ကြံစည်ခြင်းနှင့်တကွ၊ သဘော တညီတညွတ်တည်းရှိသောအားဖြင့်၊ ငါဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းကို စုံလင်စေကြလော့။
တဖန်ငါဆိုသည်ကား၊ မြေကြီးပေါ်မှာ သင်တို့တွင်နှစ်ယောက်တို့သည် သဘောချင်းတူ၍ ဆုတောင်း လျှင်၊ တောင်းသမျှသောဆုတို့ကို ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူသော ငါ၏ခမည်းတော်သည် ပေးတော်မူလတံ့။
I øvrigt, Brødre! glæder eder, bliver fuldkommengjorte, lader eder formane, værer enige, værer fredsommelige; og Kærlighedens og Fredens Gud skal være med eder.
ကြွင်းသေးသောစကားဟူမူကား၊ ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်တို့၌ မင်္ဂလာရှိပါစေသော။ စုံလင်ခြင်း၊ သက်သာ ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့။ စိတ်တညီတညွတ်တည်း ဖြစ်၍၊ အချင်းချင်းအသင့်အတင့်နေကြလော့။ သို့ဖြစ်၍ မေတ္တာကို၎င်း၊ အသင့်အတင့်နေခြင်း ချမ်းသာကို၎င်း ပေးတော်မူသော ဘုရားသခင်သည် သင်တို့နှင့်အတူ ရှိတော်မူလတံ့။
Lad os diskutere disse værdier - blive enige eller uenige om dem, debattere dem, oversætte dem, gøre dem til vores egne og nuancere debatten i fællesskab - ved hjælp af internettets unikke egenskaber.
အိမ်ရှင်ကလည်းအဆွေ၊ သင်၌ မတရားသောအမှုကိုငါမပြု။ ဒေနာရိတပြားကိုအမှတ်ပြု၍ သင်သည် ငါနှင့်ဝန်ခံသည်မဟုတ်လော။
ပေတရုကလည်း၊ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဉ် တော်ကို စုံစမ်းမည်ဟု သဘောတူနှင့် အဘယ်ကြောင့် ကြံစည်ကြသနည်း။ ကြည့်ရှုလော့။ သင်၏ ခင်ပွန်းကို သင်္ဂြိုဟ်သော သူတို့၏ခြေသည်တံခါးနားမှာ ရှိသည် ဖြစ်၍၊ သင့်ကိုလည်းဆောင်သွားလေဦးမည်ဟု ဆိုသော ခဏခြင်းတွင်၊
ထာဝရဘုရား၏ဗိမာန်တော်ကို တည်ဆောက် ပြီးလျှင်၊ ဘုန်းကြီး၍ မိမိရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာ ထိုင်လျက် စိုးစံလိမ့်မည်။ ရာဇပလ္လင် တော် ပေါ်မှာ ယဇ်ပုရောဟိတ်လည်း ဖြစ်၍၊ ထိုနှစ်ပါးတို့သည် မိဿဟာယ ပဋိညာဉ်ကို ဖွဲ့ကြ လိမ့်မည်။
yussuf (Английский>Испанский)perustelut tälle (Финский>Английский)chi stai chiamando (Итальянский>Английский)مستحقا (Арабский>Эстонский)generalgouvernement (Английский>Немецкий)say hi and i will post something about you (Английский>Хинди)exiled (Английский>Русский)sagrantino: (Английский>Итальянский)fat rahi hai be (Хинди>Английский)o nome da minha mae tambem é lucy (Португальский>Английский)i need your love beause is my elisir (Английский>Итальянский)sugamano (Малайский>Английский)jevan zala ka (Хинди>Английский)मृत्युभोज अभिशाप (Хинди>Английский)verkürzungsvorrichtung (Немецкий>Английский)orthopaedics (Английский>Греческий)verwachten (Голландский>Грузинский)hindi ko maintindihan kung bakit ayaw mo sa akin (Тагальский>Английский)it’s your call (Английский>Хинди)bache shor machate h (Хинди>Английский)sensationelle (Датский>Вьетнамский)les dates de début et de fin de mission ; (Французский>Английский)ano ang chainsmoker (Английский>Тагальский)bugtong na may sagot (Тагальский>Английский)groupon (Английский>Немецкий)